Isitolo esidayisa yonke impahla Natural hypoallergenic safe safe 200 count pet pet wipes wet for dogs and cats Supplier and Manufacturer | Kungcono
Igama lomkhiqizo: Kubalwa ama-200 asula izilwane ezimanzi
Inombolo imodeli: QMSJ-324
Izithako ezisebenzayo: I-Aqua, Glycerol, Methylisothiozelinone, lodopropynyl Butylcarbamate, Glycerol, disodium EDTA, AloeBarbadensisleafJuice, Tween-20, Allontion, RetinylPalmitate, Amafutha ommbila, iLanolin, LsopropyIMYRISTATE, sheo butter
Usayizi: Amasentimitha angu-5 "x 7" (12cm x 17.7cm)
Ukubala ngebhokisi ngalinye: Izibalo ezingama-200
Iphunga: Shea Ibhotela
MOQ: Amabhokisi angama-5000
I-OEM ne-ODM: Yamukela (Sekela ukupakisha okwenziwe ngokwezifiso)
Lokhu kusula okumanzi okuphephile kwezinja kungokwemvelo. Inobungani kakhulu ezilwaneni futhi ngeke ilimaze izandla zakho uma uyisebenzisa. Kungasusa ama-wet wipes ajwayelekile ezifuyweni. Lokhu kusula kufanele ube nakho ukusula kuwo wonke umndeni othanda izilwane ezifuywayo futhi ogcina ezifuywayo. Isilwane sakho sasekhaya sizoba sihle futhi sithandeke ngaphansi kokunakekelwa kwakho ngokucophelela.
* Isula isilwane se-Hypoallergenic
Sula ngobunono ijazi lesilwane sakho nezidladla njengoba kudingeka ukuze uvuselele futhi uhlanze.
1. Vula isivalo bese ukhipha kuqala ukusula kusuka enkabeni ye-roll.
2. Donsa usule ngembobo encane maphakathi nesembozo. Njengoba udonsa ukusula okuphelele ngembobo, ukusula okulandelayo kuzofika futhi kulungele ukusetshenziswa.
3. Nikeza ukudonsa okusheshayo ukwehlukanisa ukusula okukodwa kokulandelayo. Phakathi kokusetshenziswa, isivalo se-snop sivaliwe ngokuphephile ngaso sonke isikhathi ukugcina ukusula kumanzi.
4. Gcina emazingeni okushisa aphakathi kuka-50 no-90F. Ukugcina ngesikhathi sokweqisa kunganciphisa ukusebenza komkhiqizo.
* Sebenzisa ::
√ UBUSO √ IZINDLEBE √ ISIKHUMBU
√ PAWS √ AMAZINYO √ IGCOKAMA
Gwema ukuthinta ngamehlo. Gcina lapho izingane zingafinyeleli khona. Akuhloselwe ukusetshenziswa komuntu. Ungavumeli isilwane singene. Ungayisebenzisi esikhunjeni esiphukile noma esivuthayo. UNGASHAMBI.
Langaphambilini Yenza ngokwezifiso ukusula izicathulo ezimhlophe nezesikhumba kalula ngempumelelo
Olandelayo: Yamukela ama-wipe wokuhlanza isikhumba esenziwe ngokwezifiso e-Car
Ama-anti Allergy Cat Isula
Ama-anti allergies asula izinja
Khipha ku-internet Cat Eye Wipes
Izesuli Zamazinyo ezihamba phambili zamakati
Izinja ezisula kakhulu
Inja Isula Umchamo
ama-pet wipes alula ngempela
Ukusula Okumanzi Kuphephe Izinja
Isula Amakati Aphephile
Ukuhlanza Izilwane Zesilwane Ukuhlanza Izilwane Ezihlanzwayo ...
Factory wholesale boxed 100 ukubalwa yokuhlanza isilwane ...
I-deodorizing ephumelelayo enobungane ephephile ...
Ikhwalithi ephezulu usayizi omkhulu wesilwane ukuzilungisa ibhavu w ...